FBC - Baankin Misooma Ityoophiyaa kurmaana waggaa jalqabaatti Birrii biiliyoona 2.2 liqaan laatera
Baankin Misooma Ityoophiyaa kurmaana waggaa jalqabaatti Birrii biiliyoona 2.2 liqaan laatera
Finfinnee, Sadaasa 1,2010(FBC)-Baankin Misooma Ityoophiyaa kurmaana waggaa jalqabaatti Birrii biiliyoona 2.25 liqaan laatera.
Liqaan laatames walakkaa liqaaf karoorfame Birrii biiliyoona 4.3ti.
Baankichi indaastirii biyyattii jajjabeessuuf hojimaata liqaa si’oomina qabu laachuuf, imaammataa fi qajeelfamoota sakatta’ee dhiyeenyatti irra deebiin akka ifoomsu ni eegama.
Daayreektarri plaanii tarsiima’aa fi koominiskeeshinii baankichaa obbo Kiflee Haaylayyasuus akka jedhanitti, baankin isaanii liqaa damee qonnaa, indaastirii oomishaa, inarjii fi albuuda, liiz faaynaansii xixiqqaa fi jiddugaleessaaf laachuf karoorfate.
Haaluma kanaan qonnaaf Birrii miiliyoona dhibba 4 fi miiliyoona 20 karoorfame keessaa Birriin miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 17, indaastirii oomishaaf kan ramadame Birrii biiliyoona 2.9 keessaa Birriin biiliyoona 1.3 hojiirra oolera.
Raawwin karoorichaa kan xiqqaate gaaffin liqaa abbootii qabeenyaa xiqqaachuu isaatini jedhan obbo Kiflee.
Liqaa sassaabuuf karoorfate Birrii biiliyoona 1.34 keessaa Birrii biiliyoona 1.21 deebisiisera.
Oduuwwan Biroo « Kurmaana jalqabaatti sooreyyiin alaa kaappitaala Doolaara biiliyoona walakkaadhaa ol galmeessisan invastimantiitti bobba’aniiru	Briitaaniyaan deeggarsa daldala Ityoophiyaaf taasistu Paawundii miiliyoona dhibba 2tti guddiste »